DEG DEG: Xildhibaanada Baarlamaanka oo ansixiyay mooshinkii ka dhanka ahaa dhismaha Baarlamaanka Jubba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
6th June 2015 MAREEG Af Soomaali 0
(Mareeg)— Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ugu dambeyn cod u qaaday mooshinkii ka dhanka ahaa dhismaha Baarlamaanka Jubba, kaasoo saddex jeer oo hore uu dib u dhac ku imaanayay codeyntiisa.
Kulanka Baarlamaanka oo ku furmay jawi degan ayaa markii la guda galay ajandaha, isla markaana Guddoonka amray in la tiriyo tirada Xildhibaanada fadhida, si cod loogu qaado mooshinka ayaa buuq ka dhashay, waxaana markii hore tirada soo xaadirtay ay ahaayeen 150.
Hase ahaatee waxaa markii dambe xarunta golaha shacabka ka baxay Xildhibaanadii ka soo horjeeday mooshinka, waxaana ay taas dhalisay buuq.
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka oo shir guddoominayay kulanka ayaa howl wadeenada ku amray inay saf saf u tiriyaan, waxaana markii dambe la shaaciyay inay joogaan 142 Xildhibaan, kuwaasoo markii dambe cod gacan taag ah u qaaday mooshinka.
132 Xildhibaan ayaa u codeysay mooshinka inay taageersan yihiin, halka afar Xildhibaan ay diiday, lix Xildhibaan ka aamustay, sidaas uu Guddoonka ku shacaiyay in mooshinka uu ansax yahay.
Fadhiga ayaa wixii markaas ka dambeeyay sawaxan iyo sacab isu bedelay, iyadoo Xildhibaanada taageersanaa mooshinkana ay isu hambalyeynayeen, markii uu Guddoonka ku dhawaaqay natiijada codeynta.
Guddiga Farsamada Shirka Gobollada Dhexe oo sheegay in Ergooyinka badi ay qanciyeen